भिडियो – Page 536 – Etajakhabar
‘प्रेम गीत २’ को ट्रेलर युट्युवको पहिलो ट्रेन्डीङमा पर्न सफल (भिडियो)
ताजाखबर, काठमाडौं । गत वर्षकै सफल चलचित्र ‘प्रेम गीत’को सिक्वेल ‘प्रेम गीत २’ को ट्रेलर युट्युबमा नेपालको नम्बर १ ट्रेण्डिगंमा परेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रेमगीतको ट्रेलरलाई ५ लाख १४ हजार भन्दा बढी दर्शकले हेरिसकेका छन् । झन्डै २ मिनेट ३० सेकेन्ड लामो ट्रेलरमा म्यानमार, नेपालको रारा र थाइल्यान्डका मनोहर दृश्य समेटिएको छ । धेरैको चियो र चासोको बिषय बनेको चलचित्रको ट्रेलर आएपछि सबैको खु...
‘छक्का पञ्जा २’ को टिजर सार्वजनिक, दीपकराज गिरी सुध्रे होलान् की नाई ?
ताजाखबर, काठमाडौं । अघिल्लो साल कीर्तिमानी कमाइ गर्न सफल फिल्म ‘छक्का पञ्जा’को दोस्रो भाग ‘छक्का पन्जा २’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौँ, चित्लाङ लगायतका स्थानमा एक महिनामा फिल्मको छायांकन सकेको चलचित्र यूनिटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ट्रेलरमा चलचित्रका मुख्य पात्र दीपकराज गिरी र बुद्धि तामागं हैट फिचराइज छन् । ३० सेकेण्ड लामो भिडियोले दीपकराज गरिी सुध्रे होलान् की पहिलाकै अवस्थामा छन् भन्ने ...
परिक्षा दिएर फर्केका विद्यार्थीलाई पोखरामा बसले हान्यो, अवस्था गम्भिर
पोखरा- पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको अर्चलबोट नजिकै बसले स्कुटलाई ठक्कर दिदा दुई जना गम्भिर घाइते भएका छन् । पोखराको माउण्ट अन्नपूर्ण माविमा अध्ययनरत रुपेश थापा र शिशिर थापा बरपाटन स्थित बिन्ध्यावासिनी माविमा परीक्षा दिएर फर्किदै गर्दा उनीहरु सवार स्कुटरलाई बसले ठक्कर दिएको थियो । बाग्लुङबाट काठमाडौं जादै गरेको ना ५ ख ९५०५ नम्बरको बसले बिद्यार्थी सवार ग १२ प ३८२७ नम्बरको स्कुटरलाई पोखराको अर्चलब...
सुनिल थापाको खुलासा : बालीऊड नायिका प्रियंका चोपडासंग मेरो यस्तो सम्बन्ध छ
काठमाडौँ । कलाकार सुनिल थापाले नेपाली कलाकार बनेर ओस्कारको स्टेजमा जान चाहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय बलिउडका फिल्महरुमा एकपछि अर्को गर्दै जम्न थालेका कलाकार थापाले ऋषी धमलाको कार्यक्रम धमलाको हमला मार्फत आँफुले कलाकारिताको क्षेत्रमा अझै केही नयाँ काम गरेर ओस्कारको स्टेजमा जान चाहेको बताए । निकै नै प्रष्टवक्ता कलाकार थापाले बालीऊड नायिका प्रियंका चोपडासंगको आफ्नो सम्बन्धका बारेमा पनि क...
चन्द्रागिरीबाट देखिने मनमोहक दृश्यहरु भिडियोमा हेर्नुहोस्
काठमाडौं । सेवा सुरु गरेको ११ महिनापछि चन्द्रागिरी हिल्स प्रालीले आफ्नो प्रवद्र्धनात्मक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। यस भिडियोमा चर्चित हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र उद्दवराज भट्टराई देखिएका छन्। डेढ मिनेटको भिडियोमा चन्द्रागिरीको धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्व झल्काइएको चन्द्रागिरी हिल्स प्रालीले जनाएको छ। चन्द्रागिरी जाने हरेकलाई त्यहाँक...
हिमाल श्रेष्ठको गीतमा बिनोद र ऋचाको यस्तो प्रेम रोमान्स (भिडियो)
ताजाखबर, काठमाडौँ । गायक हिमाल श्रेष्ठको सानी बोलको गीत सार्वजनिक भए लगत्तै सांगीतिक बजारमा राम्रो चर्चा बटुलिरहेको छ । गायक श्रेष्ठको एल्बम सर्मपित भित्रको शीर्ष गीत सानीको भिडियोले प्रेम र बिछोडलाई नजिकबाट चिनाएको छ । जसमा स्वर तथा शब्द गायक श्रेष्ठको रहेको छ भने बुद्ध स्यांबाले संगीत भरेका छन् । नायक तथा मोडल बिनोद श्रेष्ठ र रिचा थापाले जिवन्त अभिनय गरेको गीतले आफ्नी मायालुबाट टाढिनुपर्दाका ...
१ दिनमा नै साडे ३ लाख दर्शकले हेरे प्रेमगीतको ट्रेलर, कतै तपाई पो छुट्नु भयो की ! (भिडियो)
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत २’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको १ दिनमा नै यसले साडे ३ लाख दर्शक पाएको छ । ट्रेलर यूट्युवमा सार्वजनिक भएको छोटो समयमा नै प्रेमगीत २ ले साडे तीनलाख बढी भ्यूअर्स मात्रै कमाएन नयाँ किर्तीमानी समेत कायम गरेको छ । सन्तोष सेनको लगानीमा रामशरण पाठक निर्देशित यो चलचित्र साउन १३ गते रिलिज हुँदैछ । चलचित्रमा निर्माता सेनका साथै प्रदीप खड्का, अश्लेषा ठकुरी मुख्य भू...
निखिलको फिल्म रुद्र खेलेपछि सारा र विश्व प्रेममा ? अन्तरवार्तामा नै साराले देखाइन् यस्ता संकेत (भिडियो)
ताजाखबर, काठमाडौँ । विश्व शर्मा जति ह्याण्डसम देखिन्छन् उनको कला अझ निखारिएको छ । त्यसैले त उनी नायकका रुपमा पनि देखा परिरहेका छन् । निखिल उप्रेतीको फिल्म रुद्रमा सुन्दरी मोडल तथा नायिका सारालाई प्रेम गरेपछि उनले भोग्नुपरेको अप्ठ्यारो परिस्थितीलाई ट्रेलरमा गज्जबैसँग देखिएको छ । साउन १३ गते प्रर्दशनमा आउने तयारी गरिरहेको सारा र विश्व अभिनित यो फिल्मलाई धेरैले प्रतिक्षा गरि बसेका बेला ताजाखबरले य...
‘तिम्रै भक्तिको चन्दन लगाई’बोलको भजनको भिडियो सार्वजनिक
सत्याकृत ब्यान्डले तिम्रै भक्तिको चन्दन लगाई ,नामक बोल भएको भजनको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । गम्भीर शब्द अति मधुर आवाज,र बिशिस्ट स्तरको शब्द / सङीत संयोजन रहेको उक्त भजन अति हृदयस्पर्शी,प्रेरणादायी र जीवन प्रद छ।सरल जीवनमै जीवनको गुड रहस्य र मिठास लुकेको हुन्छ भन्ने सन्देश सत्याकृत बताउदछ।गीत सांगीतको मध्यमबाट लोक मानस पटलमा र लोक हृदयमा सकारात्मक अध्यात्मिक भाव अभिबृद्दि गराउने सदआशय यस समूहको प्...
बेवारिसे लाश ब्यबस्थापन गर्दै आएका बिनय भन्छन ‘मैले बाँचेको जिन्दगी हजारौको सपना हुन सक्छ’
काठमाडौँ । महिनौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेका थुप्रै लाशहरुको जिम्मेवारी लिने कोही नहुँदा सद्गत समेत गर्न नपाई अस्पतालकै शव गृहमा कुहिएर बस्ने गरेका छन् । दुर्घटनामा परेकाहरुको सनाखत हुन नसक्दा, मृतकका परिवारले शव बुझ्न नआउँदा र पहिचान खुल्न नसकेका कारण पनि बेवारिसे लाशहरु थुप्रँदै गइरहेको बताइन्छ । टिकाथलीका एक समाजसेवी बिनयजंग बस्नेतले आज राजधानीमा बेवारिसे मृत्युवरण गरेका २ जनालाई व्यक्तिगत...
Previous 1 … 535 536 537 … 597 Next